Benefits of Automation in the workspace – NEX4 Blog
Benefits of Automation in the workspace
Automation က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားစေနိုင်လဲ ❓‍‍‍‍‍‍
ဘဏ်တွေ အပါအဝင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုမှာ ဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင် နေ့စဉ် ထပ်ခါထပ်ခါ လုပ်နေရတဲ့ အလုပ်(Repetitive Tasks) တွေရှိပါတယ်။ ဒီလို Manual & Repetitive Tasks တွေကို လုပ်နေရတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေနေရာမှာ အလိုအလျောက်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Software Tools၊ Frameworks၊ Appliances နဲ့ Technology တွေ အသုံးပြုလိုက်တာကို Automation လုပ်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။
Automation က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားစေနိုင်လဲ❓
1. Automation ကိုအစားထိုးလုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင် နေ့စဉ်ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်နေရတဲ့ Tasks တွေကြောင့် ကုန်ရတဲ့ အချိန်တွေကို သက်သာသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ Data Analyst တစ်ယောက်ဟာ နေ့တိုင်း Data Sources အများကြီးကနေ Data တွေကိို Analyze လုပ်လို့ရအောင် Transform ( Cleaning, Filtering, Transposing rows and Columns etc.) လုပ်ပြီး Analytics လုပ်တယ်ဆိုပါစို ့။ ဒါတွေဟာ သူ့အတွက်် Data တွေကို Analytics လုပ်ချင်တို်င်း အကြိမ်ကြိမ် လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို Repetitive Tasks တွေကို Data Analyst ကိုယ်စား အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ပေးမယ့် Software တစ်ခု အသုံးပြုလိုက်မယ်ဆိုရင် Data Analyst အတွက် အချိန်ကုန်သက်သာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
2. လူကိုယ်တိုင်လုပ်ရတာကြောင့်ဖြစ််ပေါ်လာတဲ့ အမှားတွေကို Automation ကလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ Data သွင်းရတဲ့ အလုပ်မျိုးမှာ Data ကို လူကိုယ်တိုင်သွင်းမယ့်အစား Software ဒါမှမဟုတ် Tool တစ်ခုုခုကို သုံးပြီးသွင်းတဲ့အခါ လူကြောင့့် Data မှားသွင်းမိတဲ့ Human Error မျိုးကို လျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
3. Automation လုပ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အတွက် Repetitive Tasks တွေကြောင့် ကုန်နေရတဲ့အချိန်တွေ ပိုထွက်လာပါမယ်။ ထွက်လာတဲ့ အချိန်တွေကို တခြား နေရာတွေမှာ ကောင်းကောင်း အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
4. ဝန်ထမ်းတွေက Repetitive Task တွေကိုပဲ အချိန်ပေးနေရတဲ့အခါ Business ကိုဘယ်လို Value ထွက်အောင် လုပ်မလဲဆိုတဲ့ Creation ဘက်တွေ ၊ Thinking ဘက်တွေမှာ အားလျော့သွားပါတယ်။ Automation က ထပ်တလဲလဲလုပ်နေရတဲ့ ပျင်းစရာကောင်းတဲ့ အလုပ်တွေကို လျှော့ချစေနိုင်သလို Manual Effort လဲ သုံးစရာမလိုတဲ့ အတွက် မပင်မပန်းနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ပိုပြီး Innovative ဖြစ်စေပါတယ်။
C-Level (CTO ၊ COO ၊ CIO ) ကလူတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဝန်ထမ်း တွေရဲ့ Repetitive Tasks တွေနေရာမှာ Automation လုပ်ထားတဲ့ အတွက် အချိ်န်တွေပိုထွက်လာတာကြောင့် သူတို့ကို တခြား Tasks တွေမှာ Assign ချနိုင်တဲ့ အတွက် Productivity ပိုကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
NEX4 ICT Solution အနေနဲ့ ဖော်ပြပါ Automation နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Solution များကို လူကြီးမင်းတို့စိတ်တိုင်းကျ Consulting, Implementation များလုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။